15 Koorsooyinka Karinta Online-ka ah ee wata Shahaadooyinka 2020
15 Koorsooyin Karinta Khadka Tooska ah oo Bilaash ah oo wata Shahaadooyin
Maqaalkan, waxaad ka heli doontaa dhowr koorsooyin cunto karis ah oo internetka ah oo wata shahaadooyin ay weheliyaan fiidiyowyadooda sharraxayaasha oo dhammaantood bilaash ah ama lacag magac u yaal ah gaar ahaan kuwa raadinaya inay helaan shahaadooyin xirfadeed dhammaadka.
Awoodda qofku u leeyahay inuu afka ka xidho wax la cuni karo oo uu ka codsanayo burooyinka dhadhanka marka baahi loo qabo waa mid aad muhiim u ah. Xitaa haddii aadan aqoon sida loo dhigo, waxaa jira fasalo bilaash ah oo wax lagu kariyo oo aad ku baran karto sida loo sameeyo noocyada kala duwan ee cuntooyinka iyo kor u qaadista cayaarahaaga. Waxa xiisaha lihi, iyaga ayaa sidoo kale loo haystaa shahaadooyin.
Mar labaad, adoo cunaya cuntada guriga lagu sameeyo, waxaad helaysaa dareen ah qanacsanaan cunista walxaha aan waligaa bixin karin.
Ma ogtahay in u sameynta lama filaan raaxo leh qofka aad jeceshahay halkaasoo lagu soo bandhigay farshaxanka cunnada ee cajiibka ah ay suurtogal tahay inay kaa dhigto mid aad u badan?
Haddii aad jeclaan lahayd inaad barato sida loo helo koorsooyinka bilaashka ah ee aad wax ku karin karto, qodobkaan adiga ayaa loogu talagalay.
Dhanka kale, waa tan jadwalka mawduucyada hoose ee muuqaalka guud ee waxa laga filayo maqaalkan.
1 Koorsooyinka Karinta Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee wata Shahaadooyinka
1.1 Koorsooyinka karinta ee aasaasiga ah ee la kariyey ee shahaadada leh shahaadada
1.2 Ka fikir sida kuugga
1.3 Gordon Ramsay Baray Cunto karinta
1.4 KOOXIN KU KARBAASH AH: Abuurista Suxuunta Farshaxanka (Skillshare)
1.5 Xirfadaha karinta Aasaasiga ah
1.7 Aasaaska Karinta Caafimaadka leh
1.8 Farsamooyin Fudud oo loogu talagalay Barashada Cunnada Hindida ee caadiga ah
1.9 New York Times karinta
1.10 Kimistariga Jikada
1.11 Farsamooyinka karinta
1.12 Karinta Cunto fudud oo Caafimaad leh
1.13 Baro Farshaxanka Hindiya
1.14 Sayniska Gastronomy
1.15 Hilibka Waxaan Cuneynaa
1.17 Talo soo jeedin
Koorsooyinka Karinta Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee wata Shahaadooyinka
U fikir sida kuugga
Gordon Ramsay Baray Cunto karinta
Karinta loo waxyooday
Xirfadaha karinta ee aasaasiga ah
Sameynta kubbadda hilibka
Aasaaska cunto karinta caafimaadka leh
Farsamooyin fudud oo lagu barto karinta Hindida caadiga ah
New York Times karinta
Farsamooyinka karinta ee Thomas Keller
Cunto karis fudud oo caafimaad leh
Baro farshaxanka karinta Hindida
Koorsooyinka karinta ee aasaasiga ah ee la kariyey ee shahaadada leh shahaadada
Kani waa mid ka mid ah koorsooyinka ugu fiican ee bilaashka ah ee wax lagu karsado ee laga heli karo Skillshare oo leh shahaado dhammaystir ah. Waa fasal udiyaar gareeyn kasta oo cunto kariye ah oo uu diyaariyay Zakary Pelacciochef oo ah kuugga xirfadleyda ah.
Waxay ku siineysaa sharrax qoto dheer oo ku saabsan sida wax loo shiilayo min bilow ilaa dhammaad. Sidoo kale koorsadan, waxaad fursad u leedahay inaad barato sida loo kala saaro digaaggaaga, u kari xilligiisa, oo aad u samaysato salad khudradda ah si aad u dhammaystirto.
Hoos waxaa ku yaal xiriiriye si aad isaga diiwaangeliso fasalkan khadka tooska ah ee bilaashka ah.
Ka fikir sida kuugga
Sidoo kale Skillshare waa koorsadan cunto karinta ee bilaashka ah ee 38-daqiiqo ah halkaas oo aad ku noqonayso cunto karis wanaagsan adiga oo ka qaybqaadanaya oo aad helayso shahaado dhamaadka.
Sida bilow ah, waxaa jira baahi kasta oo loo qabo in lagu xoojiyo kalsoonidaada kushiinka adoo baranaya sida la isugu geeyo maaddooyinkaaga maxalliga ah si loo sameeyo saxan wanaagsan.
Tababaraha fasalkan Kenny Monroe ayaa sidoo kale ku qaadan doona qalabka wax lagu kariyo ee muhiimka ah ee aad ugu baahan tahay jikada caadiga ah, badbaadada mindida, iyo xirfadaha qaarkood ee muhiimka ah ee aad u baahan tahay intaad mindi gacanta ku heyso.
Fasalkan wax lagu karsado ee internetka waxaa loo heli karaa dhammaan heerarka guryaha lagu kariyo wuxuuna leeyahay waqti go'an oo yar. Arrin xiiso leh, waxaa jira caddeyn dhamaadka koorsadan.
Waxaad leedahay hanad jikada magaca, Gordon Ramsay si uu kuugu qaado fasalkan karinta ee bilaashka ah ee internetka.
Tilmaamaha koorsadan waxaa ka mid ah barashada safarkiisa karinta, helitaanka xirfado farsamo, iyo mindiyo mindiyo.
Halkan, waxaad sidoo kale ku baran doontaa noocyo qaar oo ka bilaabma ukunta ugaarsiga, ukunta dufan leh oo leh urchin badda, aargoosatada ravioli, boqoshaada biriijka, iwm.
Koorsadan karinta ee internetka, weligaa kuma khaldami kartid inaad noqotid khabiir!
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad wax aqriso 17 Hay'adaha Waxbarshada ee Loogu Talo Galay Kanada
KOOXIN KU KARBAASH AH: Abuurista Suxuunta Farshaxanka (Skillshare)
Ma ku hamiyaa inaad dadka kaga cabsato hal-abuurkaaga? Ha dhaafin koorsadan gaarka ah ee wax lagu karsado ee khadka tooska ah shahaadada maxaa yeelay waxay ku siin doontaa aragti kale oo ku saabsan waxa loo karinayo.
Waxaad ka heli kartaa koorsadan bilaashka ah Skillshare oo aad ku kasban kartaa xirfado cusub oo ku saabsan cunto karinta taabashada hal-abuurka.
Arrin xiiso leh, waxaad ka daawan kartaa khadka tooska ah sidoo kale waxaad marin u heli kartaa agabyada barashada.
Xirfadaha karinta Aasaasiga ah
Iyadoo aan la helin koorsadan Udemy, waxaan sharad ku siinayaa inaadan ogeyn inay jirto hab sax ah oo lagu jarjaro basashaada. Kaqeybqaadashada koorsadan karinta ee khadka tooska ah waxay kugu xoojineysaa adiga dareen weyn oo aad ugu raaxeysan karto jikada.
Tani waxaa lagu sameeyaa iyadoo lagu barayo sida loogu ciyaaro habab badan oo ka bilaabma faaruqinta khudradda cagaaran, hilibka lo'da ee buniga ah ilaa cuntooyinka caadiga ah sida maraq khudradda khudradda, béchamel, iwm.
In ka badan 3,759 arday ayaa heli kara tan koorsada internetka oo diyaar u ah bilowga iyo cunto kariye dhexdhexaad ah.
Haddii aad rabto inaad hesho waxa ay u baahan tahay si aad u allifto cuntadaada maraqa, halkan waa mid ka mid ah koorsooyinka ugu wanaagsan ee wax lagu karsado ee internetka oo wata shahaadooyin xaqiiqdii adiga kugu habboon.
Sababtoo ah xaqiiqda ah in arday badan ay fursad u heleen koorsadan, tani waxay noqon kartaa fursad aad u wanaagsan oo aad uga faa'iideysan karto si aad u noqoto cunto kariye ka wanaagsan. Faa'iidada dheeraadka ah ee koorsadan ayaa ah inay leedahay feejignaan una taagan tahay mid ka mid ah koorsooyinka ugu fiican ee wax lagu karsado ee internetka aad gacmaha saari karto.
Guji xiriirka hoose si aad ugu biirto fasalka bilaashka ah
Aasaaska Karinta Caafimaadka leh
Waa shay aasaasi ah in la barto sida wax loo karsado iyo mid kale oo caafimaadka lagu ilaaliyo intaad jikada ku jirto. Qiyaastii saacad iyo 17 daqiiqo, koorsadan bilaashka ah ee khadka tooska ah ee internetka ah ayaa kugu qalabeyn doonta xirfadaha lagama maarmaanka u ah inaad ku guuleysato habkaas oo u muuqda inay tahay hawl kor u kac ah waxayna ku siin doontaa shahaado dhammaadka.
Koorsadani waxay leedahay saddex qaybood oo waaweyn halka aad sidoo kale baraneyso sida loo cabiro maaddooyinka, u maydh alaabta ceyriinka ah, u dhiso saldhig dhadhan, qalabka jikada ee aasaasiga ah, iyo dahaadhka cuntada.
Eeg 7 Jaamacadood oo leh Awoodo Waawayn midkiiba Ardaygii Dunida
Farsamooyin Fudud oo loogu talagalay Barashada Cunnada Hindida ee caadiga ah
Sababta oo ah dhadhanka cuntooyinka Hindida ah, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad barato sida loo sameeyo qaar ka mid ah waxyaabaha macaan ee ay Shefaly Ravula had iyo jeer u joogto si ay kuu dhex dhigto barahaaga.
Koorsadan bilaashka ah ee khadka tooska ah waxaa loogu talagalay ardayda heerarka oo dhan oo muujiya xiisaha karinta qaabka Hindida.
Markaad dhameysato koorsadan 46-ka daqiiqo ah, waxaa lagaa doonayaa inaad soo celiso wixii farsamooyin cunto karin ah ee la baray.
Waqtigan marka suxuunta cusubi ku badan yihiin, waxaad waqti u heli kartaa inaad booqato websaydhka New York Times si aad u barato sida looga shaqeeyo waxyaabaha caadiga ah ee cuntada weyn.
Koorsadan khadka tooska ah waxay ku habboon tahay dhammaan heerarka cunto kariyeyaasha waxayna leedahay tiro wanaagsan oo cuntooyin ah oo loogu talagalay kuwa cusub iyo kuugga cuntada si ay isugu dayaan.
Koorsadan onlaynka ah sida ay u dhigeen Massachusetts Institute of Technology kugu baranayaa cilmiga ka dambeeya karinta. Macallimiin khibrad leh, waad fahmi doontaa qarsoodiga ah sida farshaxanka karinta u noqon karo mid gaar ah.
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato qaabka jikada, khudradda, baastada, iyo ukunta ayaa halkan ku jira fasalkan internetka ee bilaashka ah.
Iyada oo casharo fiidiyoow qoto dheer leh, koorsadani waxay kaaga tagi doontaa nidaam lagu kalsoonaan karo oo ah awoodaha cuntada. Waxay si wax ku ool ah uga mid tahay koorsooyinka wax lagu karsado ee internetka!
Karinta Cunto fudud oo Caafimaad leh
Koorsadan khadka tooska ah ee bilaashka ah ee 'Udemy' waxaa loogu talagalay Aabbayaasha halkaas jooga ee diyaarka u ah inay ku sii xoojiyaan jikada. Xaqiiq ahaan, waxaa loogu talagalay shaqsi kasta oo u baahan inuu helo dadaal la'aanta ku kariska dheriga qiiqa iyo sameynta cashada jannada ee aan ku mashquulin tan waqti ah. Waa faa iido wadaag ah!
27 wada hadal oo qaadan doona 2 saacadood iyo 43 daqiiqo in lagu shaqeeyo, waxaad ku baran doontaa waxyaalaha dheriga qiiqaya iyo sida ay u siiso xulasho aan caadi ahayn ee qorshooyinka dhawaaqa.
Recipes waxay ku daraan yam burritos, digaag dabaaldega Morocco, Parmesan baradhada, salmon oo leh khudradda qaabka Aasiya, iyo qaar kaloo badan!
Baro Farshaxanka Hindiya
Koorsadan Udemy waxay kaa caawin doontaa kordhinta aragtidaada ku saabsan cunto karinta Hindida. Waxaad ogaan doontaa sida loogu qabto noocyada yaabka leh ee cuntada Hindida ah qaab dhab ah oo afka lagu waraabiyo. Waxay ku habboon tahay dhammaan heerarka mana u baahnid inaad yeelato khibrad cunto karis hore.
Koorsadan khadka tooska ah waxaa lagu diyaariyey 78 casharro waxtar leh iyo gebi ahaanba 4 saacadood oo qalab ah. Qayb ka mid ah dhibcaha aad dabooli doonto ayaa ah xawaashka ugu sarreeya ee dhadhamiya cuntada Hindida iyo sida wax looga beddelo waxyaabaha aad ka kooban tahay marka aad cuntada samaynayso.
Kani waa mid ka mid ah koorsooyinka ugu sarreeya ee bilaashka ah ee wax lagu karsado ee internetka oo leh shahaadooyin laga heli karo Coursera oo ay bixiso Jaamacadda Sayniska iyo Teknolojiyadda ee Hong Kong.
Waxay kuu soo bandhigeysaa heerar kala duwan oo macquul ah oo aasaasi ah oo taageeraya istiraatiijiyadda karinta, u diyaarsanaanta cuntada, iyo raalli ahaanshaha cuntada.
Mawduucyada la daboolay waxay leeyihiin aragti adag oo ku saabsan sayniska iyo isticmaalka sayniska maaddada. Kuwa kale, waxay ku daraan ka faa'iideysiga cunnada la kariyey, cilmiga jir ahaaneed iyo koritaanka ee kulliyadaha, juqraafi ahaan, iyo saameynta bulshada ee cuntada, iyo sababaha ka dambeeya habeynta cuntada.
Markaad dhammayso kooraskan, waxaad awoodi doontaa inaad:
Samee cuntadaada gaarka ah
Ku mahadnaq farshaxanka ku soo biirista sayniska karinta iyo cuntada.
Hilibka Waxaan Cuneynaa
Koorsadan karinta ee bilaashka ah ee khadka tooska ah waxay dooneysaa inay kaa iftiimiso tayada iyo jiritaanka cuntooyinka muruqyada. Waxay kaloo wax ka qabataa arrimaha la xiriira beeraha xoolaha.
Waa fasal aad wax ku barato adigoo ku socda xawaarahaaga waxayna qaadataa 14 saacadood inaad ku dhammayso.
In kasta oo fasalladaan karinta ee bilaashka ah ee internetka laguu qeexay adiga, waxaa habboon in aad ku biirto mid ka mid ah fasallada si loo hagaajiyo xirfadahaaga cuntada. Aad baad ugu mahadsantahay fiidiyowyada aad had iyo jeer dib ugu laaban karto markii aad ku celceliso wixii aad soo baratay.
In kasta oo shahaadooyinka qaarkood ay lacag la'aan yihiin, waxaad u baahan kartaa inaad calaamo ka bixiso kuwa kale. Si kastaba ha noqotee, xaqiiqda ayaa weli ah in koorsooyinkan khadka tooska ah ay qiimo weyn leeyihiin.
Deeq waxbarasho oo buuxda oo Kanada ah
Jaamacadaha Lacagta Bilaashka ah ee Mareykanka
Ku saabsan Waxbarashada Bilaashka ah ee Kanada
Jaamacadaha la awoodi karo ee Kaalifoorniya
Jaamacadaha ugu jaban ee Koonfur Afrika
ugu fiican koorsooyin online lacag la'aan ah shahaadooyinkakoorsooyin bilaash ah oo online ah
Previous Post:20 Koorsooyinka Xisaabta Jaamacadeed ee Sare ee Ardayda
Post Next:Sida Ugu Haboon Ee Loogu Diyaar Garoobo Imtixaanada Imtixaanka